Ibsa Ejjennoo Xumura Jilaa GWA – WAAQEFFANNAA
Posted By: @Waaqeffannaa July 7, 2018
“Ayyaanni waggaa 10ssoo hundeeffama GWA Waxabajjii 22-24 bara 2018 Norway, Bergen keessatti gaggeeffame milkiin xumurame. Ayyaana kana irratti hayyooti Oromoo Australia, USA (Washington DC fi Minnesota), Kanaadaa, Awuroppaa fi Oromiyaa keessaa irratti hirmaatuun beekumsa, ogummaa fi muuxannoo qorannoon bira gahan dhiheessaniiru. Hirmaannaan isanis guddina amantii fi aadaa Oromoof gahee guddaa kan gumaachuudha.
“… GWA qaama furmaataa ta’ee akka hojjatu irratti waliifgalameera. Kanaaf, nuti hirmaattonni Ayyaana waggaa 10ffaa hundeeffama GWA murtiilee fi
ejjannoolee armaan gadii fudhannee jirra.”
1. Gadaan guddatee jiruu fi jireenya ummata keenyaa keessatti akka madda furmaata ta’uuf, sirna Gadaa sirna baruu fi barsiisuu keessatti akka dabalamu gaafanna.
2. Waaqeffannaan amantii ganamaa kan dhalooti Kush ittiin boonan waan ta’eef, Oromiyaa, Finfinnee keessatti akka Galma Guddaa qabaatuuf, karaa mootummaa deeggarsi barbaachisu akka godhamuuf jabeessinee gaafanna.
3. Miseensoti Waaqeffannaa lafa awwaalchaa argachuun mirga uumamaa waan ta’eef, Oromiyaa keessatti hatattamaan bakka awaalchaa akka argatan gaafanna.
4. Irreechaan aadaa eenyummaa Oromoo mul’isu waan ta’eef, Irreechaan akka Guyyaa Ayyaanaa biyyaatti Dhahaa biyyaa keessatti akka galmeeffamu gaafanna.
5. Irreechaan aadaa eenyummaa Oromoo mul’isu waan ta’eef, Finfinnee keessatti akka deebi’ee wiirtuu Irreeffannaa qabaatu gaafanna.
6. Gadaa fi Waaqeffannaan dirqama uumama eeguu fi kunuunsuu waan qabaniif, naannoo fi bosona Oromiyaa eeguu fi kununnsuu keessatti akka bal’inana hirmaatanii hojjatan gaafanna.
Aadaa fi amantii keenya deebisuuf jabaannee hojjenna!
For PDF format:Ibsa ejjennoo xumura jilaa 07072018
Be the first to comment on "Ibsa Ejjennoo Xumura Jilaa GWA"